Myanmar Permanent Representative responds one-sided report of High Commissioner for Human Rights and urges her to provide technical assistance to Myanmar at Human Right Council in Geneva – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar Permanent Representative responds one-sided report of High Commissioner for Human Rights and urges her to provide technical assistance to Myanmar at Human Right Council in Geneva
The High Commissioner for Human Rights presented the annual reports and oral update on 20 March 2019 at the on-going 40th Session of the Human Rights Council in Geneva.
During the session, Permanent Representative of Myanmar U Kyaw Moe Tun deliveredastatement in response to the High Commissioner’s report on Myanmar submitted to the Council in pursuant to the Council’s resolution S-27/1.
In his statement, the Permanent Representative affirmed that Myanmar shall not be obliged to accept the one-sided report of the High Commissioner and its recommendations.
He pointed out that the report reflected one-sided narratives and ignored government’s efforts and visible progress. It has shown complete lack of understanding on the complexities and challenges on the ground.
He also stated that impartiality and inclusiveness are of fundamental importance for multi-ethnic and multi-religious Myanmar in the promotion and protection of human rights as well as in buildingademocratic federal union.
Speaking of the situation in Rakhine State, he said, “The issue of Rakhine State is hugely complex with many challenges” and that Government is fully committed to findasustainable solution for all people in Rakhine State. He informed the Council the speeding up of the implementation of Kofi Annan Advisory Commission’s recommendations under an Action Plan, covering five priority areas namely issuance of citizenship, freedom of movement, closure of IDP camps, education and health.
The Permanent Representative shared Myanmar’s concern over the plight of all affected communities after the ARSA terrorists attack and reiterated Myanmar’s readiness to receive verified returnees in accordance with the bilateral agreements with Bangladesh. Myanmar informed Bangladesh side to resume the Joint Working Group Meeting in April to commence repatriation of verified displaced persons including 444 Hindus who of their own volition are desperate to return. He added that Myanmar has been working with UNDP and UNHCR, ASEAN friends and regional partners to create conducive environment for the returnees.
The Rakhine State Investment Fair was held recently to generate job opportunities, income and long term development andanumber of on-going projects were implemented to strengthen social cohesion in Rakhine State, he said.
The Permanent Representative expressed his disappointment at the irresponsible comments of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar on Rakhine State Investment Fair which is aimed for bringing prosperity to all people in Rakhine State.
He reaffirmed Myanmar’s position on FFM that Myanmar categorically objected its establishment, as well as its narrative-based report. However, Myanmar takes allegations of human rights violation seriously. He updated on the Independent Commission of Enquiry as well as the recent establishment of an investigation court by the Armed Forces of Myanmar to investigate all alleged violations of human rights in Rakhine State. He emphasized, “The Government is willing and able to address the accountability issue. Therefore, we strongly reject any move to bring the issue to international judicial system.”
He pointed out that the world’s attention narrowly and only focused on the negative aspects relating to the issue in Rakhine State. Notwithstanding positive developments, Myanmar has been unfairly targeted and disproportionately put under scrutiny of multiple mechanisms of the UN.
He stressed that understanding the situation in Rakhine State requires deeper analysis and wider perspective. It should not be seen in isolation with narrow perspective.
He expressed Myanmar’s readiness to renew cooperation with OHCHR and urged the High Commissioner to extend the technical assistance to Myanmar for promotion and protection of human rights under the work plan proposed by the OHCHR last year.
He concluded by saying that Myanmar participated in the interactive dialogues in good faith and that only through constructive dialogue and cooperation, we can achieve our common goal of promotion and protection of human rights of people all over the world.
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး၏ အစီရင်ခံစာတွင် တစ်ဖက်သတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက ထောက်ပြပြောကြားကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နည်းပညာအကူအညီများပေးရန် တိုက်တွန်းပြောကြား
(၂၁-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ဂျီနီဗာမြို့)
ဂျီနီဗာမြို့၊ ကုလသမဂ္ဂရုံး၌ ၂၅-၂-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၂-၃-၂၀၁၉ ရက်အထိ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အကြိမ် (၄၀) မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းမှုတစ်ရပ်ကို၂၀-၃-၂၀၁၉ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် S-27/1 အရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာအပေါ် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ကို တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ရာ မဟာမင်းကြီး၏ တစ်ဖက်သတ်ဆန်သည့် အစီရင်ခံစာနှင့် အစီရင်ခံစာပါ အကြုံပြုချက်များကို လက်မခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က မဟာမင်းကြီး၏ အစီရင်ခံစာတွင် တစ်ဖက်မှ ပြောကြားချက်များသာ ထင်ဟပ်လျက်ရှိပြီး၊ မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်၊ ထင်သာမြင်သာသည့် တိုးတက်မှုများ ကို လျစ်လျူရှုထားကြောင်း၊ အစီရင်ခံစာသည် မြေပြင်မှ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကောင်းစွာ နားလည်မှုမရှိခြင်းကို ပြသနေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ စုပေါင်း နေထိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးတို့တွင် မျှတမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုတို့သည် အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာဖြင့် ရှုပ်ထွေးနက်နဲလျက်ရှိကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူများအားလုံးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖြေရှင်းမှု ရရှိရေးကို အပြည့်အဝ ကတိကဝတ် ပြုထားကြောင်း၊ ကိုဖီအာနန် အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက် အများစုကို လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်၊ IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စသည့်နယ်ပယ် (၅) ခုကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဆာအကြမ်းဖက်သမားများ၏ ကြိုတင်အကွက်ချ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည့် အသိုက်အဝန်းများ အားလုံးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း၊ စိစစ်ပြီး နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အကြား သဘောတူညီချက်များ နှင့်အညီ ပြန်လည်လက်ခံရန် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အဆင်သင့်ရှိကြောင်းကို ထပ်လောင်းအတည်ပြု ပြောကြားလိုကြောင်း၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်လာ လိုသည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် (၄၄၄) ဦး အပါအဝင် စိစစ်ပြီးသော နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည် လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန်အတွက် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ဧပြီလအတွင်း ကျင်းပရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ယခင်လက အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် နေရပ်ပြန်လာမည့်သူများအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးရေးအတွက် UNDP ၊ UNHCR အပြင် အာဆီယံနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ မကြာသေးမီက အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးရေး၊ ဝင်ငွေတိုးပွားစေရေးနှင့် ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုအသိုက်အဝန်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမိုခိုင်မာစေရန် စီမံကိန်းအများအပြားကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူများအားလုံး သာယာဝပြောစေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးကို လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူက တာဝန်မဲ့ အဆိုးမြင်သည့် မှတ်ချက်မျိုးပြုခြင်းကို စိတ်ပျက်မိကြောင်းလည်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ (FFM) အား ကနဦး ဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်ကတည်းကပင် FFM အား လည်းကောင်း၊ ၎င်း၏တစ်ဖက်သတ် ပြောကြားချက်များအပေါ် အခြေခံသည့် အစီရင်ခံစာအားလည်းကောင်း ပြတ်သားစွာ ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခိုင်မာသည့် သက်သေအထောက်အထားများရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲမှုများ အားလုံးကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် လွတ်လပ်သော စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များ အားလုံးကို စစ်ဆေးရန်အတွက် တပ်မတော်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် စိတ်ဆန္ဒသာမက၊ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းလည်းရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးသို့ ရောက်ရှိစေရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုမျိုးကို မဆိုပြင်းထန်စွာ ပယ် ချကြောင်း အလေးအနက်ထား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကျဉ်းမြောင်းသော အမြင်နှင့် အပြုသဘော မဆောင်သည့် အမြင်ဖြင့်သာ အာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်နေသည်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းကြောင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် တိုးတက်မှုများ ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပစ်မှတ်ထားကာ ကုလသမဂ္ဂ၏ များစွာသော ယန္တရားများအောက်၌ မျှတမှုမရှိသည့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ခံနေရကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စကို နားလည်ရန်အတွက် ပိုမိုနက်နဲသော လေ့လာမှုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျဉ်းမြောင်းသော အမြင်များဖြင့် သီးသန့်ထားရှုမြင်၍ မရကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလက လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတွင် မိမိပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာအနေဖြင့် OHCHR နှင့် ပြန်လည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောကြားလိုကြောင်း၊ ယမန်နှစ်က OHCHR မှ အဆိုပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးအတွက် နည်းပညာ ကူညီထောက်ပံ့မှုများပေးရန် မဟာမင်းကြီးအား တိုက်တွန်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်တွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ယခုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွင် ကောင်းမွန်သော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ပါဝင် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သော ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်သာ မိမိတို့၏ ဘုံရည်မှန်းချက် ဖြစ်သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူများအားလုံး၏ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။